ရင်ခုန်စရာ ညအိပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ အလန်းလေးလုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ရင်ခုန်စရာ ညအိပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ အလန်းလေးလုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် က တော့ အနုပညာ လောက မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူထား နိုင်ခဲ့ပြီး အထာ ကျကျ ဆော့ကစား ထား တဲ့ အမိုက် စားTiktok လေးတွေ ကို ပရိသတ် တွေ ရှေ့ ချပြလေ့ ရှိ ပါတယ်… ။ ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင် ဆိုင် ထား နိုင်ခဲ့ တဲ့ သူမ က တော့ ကြော်ငြာ တွေကို လည်း ရိုက် ကူးလျက် ရှိနေ ခဲ့တဲ့ အနုပညာ ရှင် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်… ။ သူမ က တော့ ​ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေး တွေ ကိုလူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေးလေ့ ရှိပါ တယ် … .
သူမ က တော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင် ကြောင့် ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ ကိုယ်လုံး လေး ပေါ်လွင် နေပြီး အထာ ကျကျ ဆော့ ကစားထား တဲ့ Tiktok ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို ချပြလာခဲ့ ပါ တယ်… ။ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ဆော့ကစား ထား တဲ့ သူမရဲ့ Tiktokလေး တွေ က အချစ် တွေ ပိုစေခဲ့ တာ ပဲဖြစ် ပါ တယ်… . ချစ် ပရိသတ်တွေ အ တွက် မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အသည်း ယား စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ Tik Tok လေးကို ပြန် လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ရ ပါ တယ် … .
ဖူးပွင့်သခင် က တော့ တစ်ချိန် က အောင်မြင် တဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ် ယောက် အဖြစ် ရပ်တည် ထားနိုင်ခဲ့ ပြီး အနုပညာ လော က မှာ နေရာ တစ် ခုကို ရယူ ထား နိုင်ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်.. ။ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တဲ့ ဇာတ်ကား တိုင်း ကို အကောင်း ဆုံး နဲ့ အပီပြင် ဆုံး သရုပ်ဆောင် လျက် ရှိနေ ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ် ကားကြီး တွေ ကိုလည်း ရိုက် ကူး လျက်ရှိ နေခဲ့ ပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာ ရယူ ထား နိုင်ခဲ့ ပါ တယ် နော် … .
မင္းသမီး ေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ က ေတာ့ အႏုပညာ ေလာက မွာ ေနရာ တစ္ခုကို ရယူထား နိုင္ခဲ့ၿပီး အထာ က်က် ေဆာ့ကစား ထား တဲ့ အမိုက္ စားTiktok ေလးေတြ ကို ပရိသတ္ ေတြ ေရွ႕ ခ်ျပေလ့ ရွိ ပါတယ္… ။ ခ်စ္စရာ ေကာင္း တဲ့ အျပဳံးေလး ေတြ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ထား နိုင္ခဲ့ တဲ့ သူမ က ေတာ့ ေၾကာ္ျငာ ေတြကို လည္း ရိုက္ ကူးလ်က္ ရွိေန ခဲ့တဲ့ အႏုပညာ ရွင္ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္… ။ သူမ က ေတာ့ ​ေႂကြေလာက္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အလန္းစား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကိုလူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ တင္ေပးေလ့ ရွိပါ တယ္ … .
သူမ က ေတာ့ ယခုမွာ အလန္းစား ဖက္ရွင္ ေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ ကိုယ္လုံး ေလး ေပၚလြင္ ေနၿပီး အထာ က်က် ေဆာ့ ကစားထား တဲ့ Tiktok ဗီဒီယို ဖိုင္ေလး ကို ခ်ျပလာခဲ့ ပါ တယ္… ။ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ပုံစံေလး နဲ႔ ေဆာ့ကစား ထား တဲ့ သူမရဲ့ Tiktokေလး ေတြ က အခ်စ္ ေတြ ပိုေစခဲ့ တာ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္… . ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြ အ တြက္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ ရဲ့ အသည္း ယား စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ Tik Tok ေလးကို ျပန္ လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ရ ပါ တယ္ … .
ဖူးပြင့္သခင္ က ေတာ့ တစ္ခ်ိန္ က ေအာင္ျမင္ တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ ေယာက္ အျဖစ္ ရပ္တည္ ထားနိုင္ခဲ့ ၿပီး အႏုပညာ ေလာ က မွာ ေနရာ တစ္ ခုကို ရယူ ထား နိုင္ခဲ့တာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္.. ။ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ တဲ့ ဇာတ္ကား တိုင္း ကို အေကာင္း ဆုံး နဲ႔ အပီျပင္ ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိေန ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ ကားႀကီး ေတြ ကိုလည္း ရိုက္ ကူး လ်က္ရွိ ေနခဲ့ ၿပီး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္ အမာ ရယူ ထား နိုင္ခဲ့ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ တကိုယ်လုံးလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတို့အကြိုက် ကပြထားတဲ့ XMUE XMUEရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
Next post ခန္ဓာကိုယ်ကိတ်ကိတ်လေးကို ထင်ထင်ရှားရှားလေးပေါ်လွင်အောင် အမိုက်စားလေ့ကျင့်ပြနေတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး